News 18 Nepal || रोचक
एजेन्सी । मान्छेले प्रेमका लागि कतिसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण भारतको बिहारस्थित रोहतास जिल्लाको डेहरी क्षेत्रमा देखिएको छ । विवाह गर्न प्रेमीप्रेमिकाहरू मन्दिरमा जाने गरेको सुनिन्थ्यो तर भारतमा प्रहरी चौकीमा विवाह भएको घटना बाहिरिएको छ । घरपरिवारले राजी नभएपछि प्रेमीप्रेमिका जोडीले स्थानीय प्रहरी चौकीमा धुमधामसँग बिहे गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टंडवा गाउँका प्रेमी अभयकान्त र पडुहार गाउँकी प्रेमिका प्रियंकाबीच बच्चैदेखिको प्रेम सम्बन्ध प्रहरी चौकीमा विवाहमा परिणत भएको महिला थानाध्यक्ष...
एजेन्सी । कम उमेरमै बुढो हुने समस्याबाट ग्रस्त एक किशोरीको निधन भएको छ । उनी केवल १८ वर्षकी थिइन् । तर उनको शरीर १ सय ४४ वर्ष सरहको थियो । असन्ती स्मिथको गत शनिबार निधन भएको हो । उनी ‘हचिन्सन गिल्फोर्ड प्रोगेरिया सिन्ड्रोम नामक एक दुर्लभ खाले रोगबाट ग्रस्त थिइन् । जसकारण आम मानिसको शरीर आठ वर्षमा जति बुढो हुन्छ, उनको शरीर १ वर्षमा त्यति बुढो हुन्थ्यो । यी किशोरीकी...
एजेन्सी । विभिन्न रोगका जिवाणुहरुको वाहकको रुपमा रहने लामखुट्टे निकै हानिकारक किरा मानिन्छ । पोथी लामखुट्टे मानिस तथा अन्य जिवजन्तुको रगत चुस्दछ । आखिर लामखुट्टेले मानिसको रगत किन चुस्दछ ? मान्छेको रगत चुस्ने बानी लामखुट्टेलाई कसरी पर्यो ? वैज्ञानिकहरुले यसको जवाफ पत्ता लगाएका छन् जुन निकै अनौठो छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार पहिले लामखुट्टेले रगत चुस्दैनथ्यो । लामखुट्टेको शरीरभित्र भएको एक परिवर्तनका कारण विस्तारै लामखुट्टै रक्तपिपासु भएको हो । पृथ्वीमा कैयन् प्रजातिका...
एजेन्सी । उमेर पुगेका केटाकेटीले विवाह गर्न योग्य वरबधु खोज्दै विज्ञापन गर्ने गरेको सहजै सुनिन्छ । तर बुहारीले ५१ वर्षीया सासुका लागि ‘लभर’ खोज्दै विज्ञापन गरेको कुरा पत्याउनुहुन्छ ? अपत्यारिलो लाग्ने यस्तो विज्ञापन अमेरिकामा गरिएको छ । न्युयोर्कको हडसनकी एक महिलाले क्रेगलिस्टमा परेको विज्ञापन अनुसार उनकी ५१ वर्षीया सासुलाई ‘लभर’ चाहिएको छ, उसले विवाह र डिनरमा सहभागी हुनुपर्नेछ । २ दिनसम्म सँगसँगै रहेबापत ती भाडाका ‘लभर’लाई १ हजार डलर अर्थात् १...
एजेन्सी । हामी कहाँ सरकारी कार्यालयहरुमा मुस्कानसहितको सेवा दिने सरकारी नीति छ । तर, सेवाग्राहीहरुले सरकारी कर्मचारीहरुबाट मुस्कानसहितको सेवा पाउनुचाहिँ दुर्लभ हुन्छ । उता छिमेकी मुलुक चीनमा चाहिँ एउटा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई साँच्चीकै मुस्कुराउन बाध्य पारेको छ । चीनस्थित क्यानन क्यामरा बनाउने कम्पनीको कार्यालयमा मुस्कान विना ढोकाबाट भित्रै छिर्न पाउँदैनन् कर्मचारीहरु । जो कर्मचारी ढोकामा गएर मुसुक्क मुस्कुराउँदैन, उसका लागि ढोकै खोल्दैन । कम्पनीले हालै आफ्नो कार्यालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुहार...